Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Egwuregwu UNWTO na-agbanwe ntuli aka: kedu ka ọ ga-esi arụ ọrụ ugbu a?
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Costa Rica • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa na Spain • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • WTN
19 min gụọ
Ụbọchị ọhụrụ maka njem nlegharị anya ụwa! Ụbọchị ọhụrụ maka UNWTO! Ụbọchị ọhụrụ maka njem nlegharị anya Costa Rica! Ụwa nke njem nlegharị anya bụ maka mgbanwe egwuregwu na Costa Rica na-ebute ụzọ na usoro ntuli aka na-abịanụ na UNWTO General Assembly na Madrid.
Taa The Hon. Gustav Segura Costa Sancho, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Costa Rica etinyela olu ya n'ihu ọha ịrịọ votu vootu nzuzo maka nkwenye nke odeakwụkwọ ukwu UNWTO na Mgbakọ UNWTO na-abịa na Disemba 3, 2021
Arịrịọ a ga-ewepụ nkwenye nke SG site na nnabata. Nkwagharị a bụ nke mbụ na akụkọ ntolite UNWTO, yana mgbanwe egwuregwu.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili ugbu a agaghị enweta 2/3 votes achọrọ ka a kwadoro maka oge ọzọ? Edepụtara usoro ahụ kpọmkwem n'isiokwu a - ma dị mfe!
N'ime ihe ịtụnanya taa, Hon. Gustav Segura Costa Sancho, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Costa Rica kpaliri ya na obodo ya n'oche ọkwọ ụgbọ ala nke njem nlegharị anya ụwa.
Hon. Gustavo Segura Sancho, Minister nke Tourism Costa Rica
N'aha gọọmentị ya, ọ rịọrọ n'ihu ọha ka e nwee votu vootu nzuzo iji kwado ndụmọdụ ndị Council Council kwadoro iji kwado odeakwụkwọ ukwu UNWTO maka oge ọzọ. votu a ga-eme na Disemba 3, 2021 na Mgbakọ Mgbakọ UNWTO na-abịa na Madrid.
Ọtụtụ ndị ozi tụrụ anya na ihe a ga-eme, ma ọ dịghị onye nwere obi ike ịrapagidesi ike n’olu nke ya ma ọ bụ ọbụna ka e hota ya.
N'igosi ezi ndu na ntinye aka na njem nlegharị anya ụwa, Hon. Gustav Segura Costa Sancho taa mere ihe ọtụtụ ndị na-atụ anya na ọ ga-eme, ma ọ dịghị onye chọrọ ịmalite.
N'ịtụle nsogbu COVID-19 na-aga n'ihu na-eme ka ọ bụrụ ihe ịma aka nye ọtụtụ mba iziga onye ozi njem ha ma ọ bụ onye nnọchi anya Madrid, mmegharị obi a Costa Rica ga-atụ anya kpalie ndị ọzọ ịgbaso otu ahụ.
Mkpakọrịta dị mma ọ bụghị naanị maka quorum, kama iji mee ka ndị otu UNWTO nwee ntuli aka ziri ezi na zuru oke. N'ịtụle njem nlegharị anya na-emegharị site na nsogbu kachasị njọ, ezigbo ọchịchị na nke siri ike ga-abara mba ọ bụla uru, akụ na ụba ya, ọrụ na atumatu ya.
Ọ ga-kwuru, na Costa Rica na-arịọ, na nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu maka oge 2022-2025 ka a ga-eme site na vootu nzuzo nke ndị niile nọ ugbu a na ndị dị irè dị ka ekwuru na ụkpụrụ. Arịrịọ a ga-amanye iwu ahụ mmekọrịta dị n'etiti steeti / UNWTO, Costa Rica kwuru n'akwụkwọ ozi o degaara ndị odeakwụkwọ UNWTO na Nọvemba 15.
ỊDỌ AKA NA NTỊ: Ntuli aka nzuzo apụtaghị "Ntụle Eletrọnịkị."
eTurboNews natara ịdọ aka ná ntị a taa site n'aka onye otu gburugburu na UNWTO nwere ihe ọmụma zuru oke. Ọ gwara eTN..
Ihe egwu dị n'etiti akwụkwọ ntuli aka ọdịnala na votu eletrọnịkị!
Isi arụmụka sitere n'aka odeakwụkwọ ukwu bụ ime ka ọ dịrị ndị otu mfe ịme ntuli aka na Mgbakọ General site na iji usoro ịtụ vootu eletrọnịkị.
N'ụzọ na-akpali mmasị, onye odeakwụkwọ ukwu ugbu a na-eme otu atụmatụ ahụ na Agenda ihe 16. Ihe a na-atụ aro ka a gbanwee iwu usoro maka Mgbakọ General (A/24/16).
Ihe kpatara onye odeakwụkwọ ukwu ugbu a nwere ike ji amasị usoro a doro anya:
Enweghị ike ịmegharị akwụkwọ ntuli aka na ndị na-akwụ ụgwọ ka a na-enyocha usoro a site na A ruo Z.
Enweghị ike inyocha votu eletrọnịkị.
Ndị odeakwụkwọ nwere ike ịmegharị ntuli aka eletrọnịkị n'ụzọ dị mfe, ebe ọ bụ na ha na-achịkwa ngwa nke usoro ịtụ vootu e-e-e. Ụdị votu a nwekwara ike ọ gaghị akwado na nzuzo nke votu ahụ. Ọ nwere ike itinye nrụgide na mba ndị ahụ nwere ike inyela mmesi obi ike nke ọnụ, mana chọrọ iwere ụzọ dị iche.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na akwadoghị odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili na Disemba 3?
Ọ bụrụ na Nzukọ Ezumezu anabataghị ndụmọdụ nke Council Executive nyere maka ọkwa nke odeakwụkwọ ukwu nke nzukọ a.
GA ga-agwa ndị isi oche na nnọkọ 115 nke a ga-eme na Madrid, Spain, Disemba 3, 2021, mepee usoro ọhụrụ maka ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu nke nzukọ.
Na-enye ndị Council Executive ntụziaka na usoro ntuli aka dị otú ahụ nwere usoro nhazi kacha nta nke ọnwa atọ na ọnwa isii, malite na ụbọchị mmeghe nke usoro ntuli aka.
Na-enye onye isi oche nke Council Executive na Secretary General nke nzukọ ahụ ka ọ kpọkọta Council Executive 116 na Mgbakọ pụrụiche, na Mee 2022, n'ebe na ụbọchị a ga-akọwapụta ya.
Aha dị ka Ad Interim Secretary General, Mr. Zhu Shanzhong, Executive Director, onye ga-ewere ọrụ dị otú ahụ na nhazi ya na Onye isi oche nke Council Executive, malite na Jenụarị 1, 2022.
Usoro na kalenda maka ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu nke nzukọ maka oge 2022-2025
December 3, 2021: Nkwado nke usoro ntuli aka na nhazi oge na nnọkọ 115th nke Council Executive na Madrid, Spain.
December 2021: Nkwuputa oghere ohere a ga-eziga na weebụsaịtị UNWTO ma dee akwụkwọ edetu a ga-ezigara ndị otu niile na-egosi oge ngwụcha maka nnata nke ngwa.
11 March 2022 (Ụbọchị a ga-akwado): Oge ngwụcha maka nnata ngwa, ya bụ, ọnwa abụọ tupu nraranye nke nnọkọ 116th nke Council Executive na Madrid, Spain, na 11 Mee 2022 (ụbọchị a ga-akwado).
Mgbe emepechara ntuli aka ahụ, a na-agwa ndị a ga-azọ ọkwa maka izi ezi nke nhọpụta ha.
11 April 2022 (Ụbọchị a ga-akwado): Rịba ama verbale nke a ga-ewepụta na-ekwupụta ọkwa ndị natara (n'ikpeazụ maka mgbasa nke candidatures bụ ụbọchị kalenda 30 tupu mmalite nke nnọkọ 116th Executive Council).
11-12 Mee 2022 (Ụbọchị a ga-akwado): Nhọrọ nke onye isi oche nke Council Council na nnọkọ 116 nke a ga-eme na Madrid, Spain, isi obodo nke nzukọ a.
13 May 2022: Ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu maka oge 2022-2025 na nnọkọ pụrụ iche nke Nzukọ Mgbakọ a ga-enwe na Madrid, Spain.
Iwu, Usoro na obere mpempe akwụkwọ:
TỌ General Assembly:
Usoro ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu UNWTO:
Nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu UNWTO nwere usoro abụọ:
Usoro nhoputa ndi ochichi na Kọmitii Executive ebe, mgbe ị na-anata ndị na-eme ntuli aka, ndị Executive Council na-atụ aro ka ha KWESỊRỊ na General Assembly onye nyocha.
Onye ndoro-ndoro ochichi a kwadoro (ma ọ bụ na ọ bụghị) site na Nzukọ Ezumezu.
Nkeji edemede 22 nke iwu UNWTO kwuputara nke ọma na nhoputa nke odeakwụkwọ ukwu ga-abụrịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị dị irè na ndị nọ ugbu a:
N'otu oge ahụ, Nkeji edemede 38, subparagraf 2, dash e) nke Iwu nke Mgbakọ General, na-ekwu na nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu ga-eji ọtụtụ ụzọ n'ụzọ atọ n'ụzọ atọ nke ndị nọ ugbu a na ndị dị irè mee ntuli aka.
Mgbe e mesịrị, isiokwu 43 nke Iwu nke Mgbakọ General kwuru n'ụzọ doro anya na a ga-eme ntuli aka site na vootu nzuzo.
Ọ bụla omenala ịhọrọ onye odeakwụkwọ ukwu site na nkwanye ugwu, mana nke a edoghị n'iwu nke ugbu a, ọ bụ omenala.
Ọ bụrụ naanị otu onye otu steeti na-ajụ n'ihi na a ga-eme ntuli aka na nzuzo, nke ahụ zuru ezu ịhapụ omenala nkwanye ugwu ma gaa n'ihu na ntuli aka nzuzo nke ndị otu niile nọ ugbu a na ndị dị irè.
Ka ahọpụtara ma ọ bụ ahọpụta ọzọ, onye ndoro-ndoro anya nke Council Executive chọrọ, ga-eru 2/3 nke ndị niile nọ ugbu a na ịtụ vootu dị irè.
Ọ bụrụ na ọnweghị ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu, mgbe ahụ, Nzukọ Ezumezu ga-eme nkwekọrịta na isi ihe 9 nke ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu, ebe ọ na-enye ndị isi Council ntụziaka ka ha mepee usoro ọhụrụ maka nhọpụta nke Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO.
Nkeji edemede 22 nke ụkpụrụ nke UNWTO gụrụ:
"A ga-ahọpụta onye odeakwụkwọ ukwu site na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị zuru oke nọ na ntuli aka na Mgbakọ, na nkwenye nke Kansụl, maka oge nke afọ anọ. A ga-emeghari nhọpụta ya. "
Oge nke ọrụ nke odeakwụkwọ ukwu nke ugbu a na-agwụ na 31 December 2021. Ya mere ọ dị mkpa na Nzukọ Ọgbakọ ịhọpụta onye odeakwụkwọ ukwu maka oge 2022-2025 na nnọkọ pụrụ iche nke a ga-eme na ebe na ụbọchị a ga-eme. kpebisiri ike na 2022.
N'ihi ya, dị ka edemede 22 nke ụkpụrụ na usoro nke 29 nke usoro iwu nke Executive Council, a ga-achọrọ Council Executive na nnọkọ 116th (11-12 May 2022).ụbọchị a ga-akwado)) ịkwado onye ahọpụtara na Nzukọ Mgbakọ. Akwụkwọ a na-enye usoro na nhazi oge maka ntuli aka dị otú ahụ.
Maka ebumnuche nke nhọpụta a, a na-atụ aro ka a na-agbaso usoro a kwadoro na, karịsịa, na iwu nke Kansụl nakweere maka nhọpụta onye ahọpụtara maka ọkwa odeakwụkwọ ukwu na nnọkọ nke iri abụọ na atọ ya na Mee 1984 (mkpebi 17 (XXIII)), gbakwunyere na ndị ahụ anabatara na nnọkọ nke iri atọ na anọ ya na Nọvemba 1988 (mkpebi 19 (XXXIV)), na na nnọkọ nke iri anọ na anọ na Nọvemba 1992 (mkpebi 19 (XLIV) debe ya.
Iwu ndị a kpọtụrụ aha n'elu, bụ nke etinyere n'ọrụ maka nhọpụta maka ọkwa odeakwụkwọ ukwu kemgbe 1992, na-enye na:
"(a) naanị ụmụ amaala nke steeti ndị so na WTO nwere ike ịbụ ndị na-eme ntuli aka;
"(b) A ga-akpọtụrụ ndị na-eme ntuli aka na Kansụl, site n'aka ndị odeakwụkwọ, site n'aka gọọmentị nke steeti ha bụ ụmụ amaala, na atụmatụ ndị a kwesịrị ịbụ. natara n'ikpeazụ karịa (ụbọchị a ga-ekpebi), akwụkwọ ozi na-enye ihe akaebe ya;
“(c) A ga-eme ntuli aka site na vootu nzuzo dịka ụkpụrụ nduzi maka ime ntuli aka site na ntuli aka nzuzo nke etinyere na Iwu Usoro nke Mgbakọ General;
“(d) A ga-ekpebi votu a dịka edemede 30 nke iwu na iwu nke 28 nke usoro iwu Council, site n'ọnụọgụgụ dị mfe, kọwara dị ka pasentị iri ise gbakwunyere otu n'ime akwụkwọ ntuli aka ziri ezi;
“(e) A ga-eduzi nhọpụta nke otu Kansụl ahọpụtara, dịka iwu nke 29 nke usoro iwu Council siri dị, n'oge nzukọ nzuzo, akụkụ nke ga-abụ nzụkọ mgbochi, dịka ndị a:
“(i) mkparita uka nke ndi nhoputa ga-eme n'oge nzuko nzuzo na-amachibido nke naanị ndi nnọchi anya ntuli aka na ndị ntụgharị ga-anọ; agaghị enwe ndekọ ederede na enweghị ndekọ nke mkparịta ụka;
"(ii) n'oge ntuli aka Secretary nke ndị ọrụ dị mkpa iji nyere aka na ịtụ vootu ga-anabata;
"(f) Council Executive kpebiri na ọ gaghị akwado onye ga-akwado onye gọọmenti nke otu obodo kwadoro na ụgwọ na-ezighị ezi (paragraf nke 12 nke Iwu Ịkwụ Ụgwọ nke agbakwunyere na Iwu);
"(g) Council ga-ahọrọ naanị otu onye ahọpụtara ka ọ kwado na Mgbakọ."
Na mgbakwunye, usoro e hibere maka nnata nhọpụta nke etinyere kemgbe 1992 na-enye ihe ndị a gbasara ngosipụta nke nhọpụta:
“Onye ọ bụla nhọpụta ga-esonyere ya na akwụkwọ ọmụmụ akwụkwọ na nkwupụta nke amụma na ebumnuche njikwa, na-ekwupụta echiche onye nhọpụta maka ụzọ ọ ga-esi rụọ ọrụ nke odeakwụkwọ ukwu. A ga-achịkọta nkọwapụta ndị a n'ụdị akwụkwọ Kansụl ma gwa ndị otu ya n'ime oke oge enyere.
"N'ịma nke ịnọgide na-enwe nha anya n'etiti ndị ahọpụtara na iji hụ na a na-agụ akwụkwọ ha, a na-atụ aro ka a kpọchie akwụkwọ ọmụmụ akwụkwọ na, sịnụ, ibe abụọ na nkwupụta nke amụma na njikwa ebumnuche na ibe isii. A ga-ewepụta nhọpụta ndị a n'usoro mkpụrụedemede n'ime akwụkwọ Council."
Ebe ọ bụ na 1992, oge-oke nke edobere maka nnata nke candidatures (nke kwekọrọ ekwekọ ọchịchị na-akwado, vitae curricula na nkwupụta nke ebumnuche ga-agbakwunyere n'ezie) eguzobela n'ime ọnwa abụọ tupu nnọkọ a chọrọ ka Council Executive họrọ onye nhọpụta. N'ihi ya, Secretariat na-agwa ndị otu niile site n'ọnụ okwu nnata nke nhọpụta ọ bụla.
Kemgbe 1997, ndị a họpụtara maka nhọpụta maka ọkwa odeakwụkwọ ukwu emeela nkwupụta ọnụ maka nhọpụta ha na ebumnuche ha n'oge nnọkọ nhọpụta Kansụl. A na-akpọ ya n'usoro mkpụrụedemede Spanish nke aha nna ha, ndị a họpụtara ka a na-ekenye oge ha nhata maka ime ihe ngosi ha nke mkparịta ụka na-esochighị.
Dị ka Iwu 29(3) nke Iwu Usoro nke Executive Council, nkwanye aka Mgbakọ nke onye a họpụtara maka ịhọpụta na post nke Secretary General: "a ga-eme site n'ọnụ ọgụgụ dị mfe nke ndị otu Council nọ na ịtụ vootu2. Ọ bụrụ na ọ nweghị onye ga-anata ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na votu nke mbụ, nke abụọ na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-eme ntuli aka na-esote iji kpebie n'etiti mmadụ abụọ a ga-anata ọnụ ọgụgụ kasịnụ. "
N'ikwekọ na omume nke nzukọ a na-eme mgbe niile, nke echetara na mkpebi 17 (XXIII) nke 1984, ọnụ ọgụgụ dị mfe bụ "akọwara dị ka pasent 50 gbakwunyere otu n'ime akwụkwọ ntuli aka ziri ezi". E kwadoro iwu a na 1988 na 1992 (mkpebi 19 (XXXIV) na 19 (XLIV)). N'ọnọdụ nke ọnụọgụ dị iche, ọ dị ka ọ dabara na mgbagha, na nkọwa nkịtị nke okwu yana na omume kachasị, ịkọwa ya kama ịnọchite anya ọnụ ọgụgụ nke votu ozugbo karịa ọkara nke votu a tụrụ nke ọma.3.
N'ihe gbasara usoro nke "nke abụọ" na "akwụkwọ ntuli aka na-esote" nke a kpọtụrụ aha na Iwu 29 (3), ọ bụrụ na ha gosipụtara na ọ dị mkpa, nkọwa nke onye ndụmọdụ gbasara iwu nyere na akwụkwọ ozi maka ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu na 1989 wee kwado ya. na 2008 (16 (LXXXIV)) ga-etinye aka na ihe omume na ndị na-eme ntuli aka abụọ ga-ekere òkè nke abụọ na ntuli aka mbụ. Ihe ga-esi na ya pụta ga-abụ na a ga-ahazi akwụkwọ ntuli aka ọzọ (na ọtụtụ ndị ọzọ dị mkpa iji nweta ọnụ ọgụgụ ndị achọrọ) n'etiti ndị atọ a ga-ekpebi ndị abụọ ga-abụ, mgbe ha nwetasịrị ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke votu, ga-emesịa sonye na votu ikpeazụ.
Nnọchite anya nke steeti site n'aka onye otu zuru oke nke nzukọ a n'oge ntuli aka nke onye nhọpụta ga-agbaso mkpebi ndị General Assembly nakweere na nnọkọ 19th ya na Republic of Korea na 2011 (mkpebi 591 (XIX)), na nnọkọ nke iri abụọ na ya. Zambia/Zimbabwe na 20 (mkpebi 2013(XX)) na na nnọkọ 633st ya na Colombia na 21 (mkpebi 2015(XXI)).
A na-echeta na ndị òtù nke edemede nke 34 nke iwu na paragraf nke 13 nke usoro ego ego na-etinye n'ọrụ n'oge nhoputa ndi ochichi, a napụrụ ha ikike ịbụ onye otu n'ụdị ọrụ na ikike ịme ntuli aka na Mgbakọ. na Kansụl ma ọbụghị na enyere ha nnwere onwe nwa oge site na itinye ihe ndị dị otú ahụ site n' Mgbakọ.
E tinyela usoro ekwuru n'akwụkwọ a nke ọma, na-ebuteghịkwa ihe isi ike ọ bụla, maka nhọpụta ndị emere kemgbe 1992.
N'ikwekọ na ndụmọdụ sitere na Ngalaba Nlebanya Njikọ nke United Nations (JIU) gbasara nhọrọ na ọnọdụ ọrụ nke ndị isi ọrụ na United Nations System Organisation (JIU/REP/2009/8), onye ọ bụla na-arịọ arịrịọ ka ọ tinye aka. akwụkwọ ezi ahụike nke ụlọ ọrụ ahụike amaara bịanyere aka na ngosipụta nke nhọpụta ya dịka akọwara na paragraf 6.
Dịka enyere n'okpuru Iwu 27(2), okwu a bụ "Ndị otu nọ na ịtụ vootu" ka a ga-aghọta na ọ pụtara "Ndị otu nọ na ịtụ vootu maka ma ọ bụ megidere". Ya mere, a ga-ewere ọjụjụ na vootu oghere dị ka ọ bụghị ịtụ vootu.
Ihe ndị Council Executive ga-eme
A na-akpọ Council Executive:
Iji kpebie na iwu ndị Council nakweere maka nhọpụta onye a họpụtara maka ọkwa odeakwụkwọ ukwu na nnọkọ nke iri abụọ na atọ ya na Mee 1984 (mkpebi 17 (XXIII)) gbakwunyere na ndị ahụ anabatara na nnọkọ nke iri atọ na anọ ya. Nọvemba 1988 (mkpebi 19 (XXXIV)), na na nnọkọ nke iri anọ ya na Nọvemba 1992 (mkpebi 19 (XLIV)) ka a ga-ahụkwa na nnọkọ nke 105 ya;
Iji kwado na, maka nkọwa nke iwu iwu na-achịkwa ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu na mkpebi ndị a kpọtụrụ aha na paragraf (a) n'elu, a ga-edeba aha na ọdịnaya nke akwụkwọ a;
Iji kpọọ ndị otu mba ka ha kwuo ndị ga-aga maka ọkwa odeakwụkwọ ukwu maka oge 2022-2025, na-ahụ na nhọpụta ha ruru n'isi ụlọ ọrụ (Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain) ọnwa abụọ tupu mmalite nke nnọkọ 116th nke Council Executive, ya bụ, n'elekere 24:00 oge Madrid, 11 Maachị 2022 (ụbọchị a ga-akwado), na kacha ọhụrụ;
Ịrịọ ndị na-aga ime ka ha nyefee, tinyere ozi gbasara akụkọ ndụ na ọrụ, nkwupụta nke amụma na ebumnuche njikwa, na-ekwupụta echiche ha n'ụzọ ha ga-esi rụọ ọrụ nke odeakwụkwọ ukwu; na
Iji kwado na nnọkọ nke 116 nke Council Executive ga-ahọrọ onye a họpụtara, ọ ga-akwado ya na nnọkọ pụrụ iche nke Mgbakọ General maka ọkwa nke Secretary General nke Organisation maka oge 2022-2025.